Qiimaha Dhirta Ogsajiinta, Dab-dhaliye Ogsajiinta Caafimaadka - Sihope
Delta P Ogsajiinta Mashiinka Samaynta
1. Hawo cadaadis leh waxaa lagu qalabeeyaa sifaynta hawada iyo qalabka daaweynta qalajinta, hawo nadiif ah oo qalalan oo ku habboon nolosha adeegga muddada dheer ee shaandhada molecular.
2. Waalka cusub ee pneumatic-ka laga gooyay ee la qaatay waxa uu leeyahay xawaare furin iyo xidhidh degdeg ah, ma daadsho, nolosha beddelka dheer, waxana uu qancin karaa habka adsorption cadaadis doorsooma si joogto ah iyo isku halaynta sare.
3. Naqshadaynta habka saxda ah, xulashada shaandhada molecular cusub
Warshada Ogsajiinta ee Isbitaalka Hoyga
1. Qaado iid cusub oo wax soo saarka ogsajiinta, si joogto ah u wanaaji naqshadaynta qalabka, yaraynta isticmaalka tamarta iyo maalgashiga raasumaalka
2. Naqshadeynta qaab-dhismeedka qalabka is haysta, yaraynta bedka dhulka
3. Waxqabadka qalabku waa mid xasiloon, kantaroolka PLC wuxuu gaari doonaa hawlgal buuxa oo toos ah, heerka fashilka hawlgalka sanadlaha ah waa mid hooseeya
waan ku xaqiijin doonaa
mar walba hel ugu wanagsan
Akhri wax dheeraad ahtag
In 1994 sano, shirkadda our waxaa la dhigay in ka badan 40,000 mitir oo laba jibbaaran warshad, taas oo ku takhasusay nidaamka oxygen shaandho kelli, mishiinka nitrogen, nidaamka sahayda dhexe ee oxygen, nidaamka nuugista dhexe, unug kombaresarada hawada, jeermiska hawada, cadaadisay qalabka hawada sifaynta, modular ozone. matoor. Tignoolajiyada Sihope waxa ay leedahay 76 teknooloji oo patented, 12 shati-hal-abuur qaran (shirkaddu waa shirkad tijaabo ah oo gobolka ah), laba badeeco ayaa lagu daray Qorshaha Tooshka Qaranka; saddex taxane ayaa lagu qiimeeyay inay yihiin wax soo saarka teknoolojiyadda sare ee gobolka.
noo sahamin adeegyada ugu muhiimsan
Dhibicda sayaxa hooseeya ee KBA-da
Qalabka nadiifinta kuleyl la'aanta ah ee Desiccant Co...
oksayji caafimaad weel ku jira...
waxaan ku talinaynaa in la doorto
go'aan sax ah
HangZhou Sihope wuxuu si dhow ula shaqeeyaa naqshadaynta xirfadlayaasha qaranka iyo hay'adaha cilmi-baarista, hal-abuurnimada tignoolajiyada oo joogto ah, hagaajinta tayada badeecada iyo tayada.
waxaanu hubin doonaa inaad mar walba hesho
natiijooyinka ugu fiican.
HangZhou Sihope ku takhasusay warshad kala soocida hawada tan 1994 sano.
Koox tayo leh oo ka kooban 302 shaqaale ah ayaa diiradda saaraya shaqadooda si ay u buuxiyaan shuruudaha macmiilka.
Waxaan ku sugaynaa weydiintaada 24saac maalintii.
Suuqayada iibka ayaa daboolay in ka badan 20 waddan.
ugu dambeeyay daraasado kiis
Mashruuca nidaamka cadaadiska hawada
waa maxay dadka ku hadla
Runtii waxaan rabaa inaan idinla shaqeeyo, sababtoo ah waxaan had iyo jeer ku shaqeyn jirnay mabda'a faa'iido wadaaga iyo ixtiraamka midba midka kale doorkiisa. Warshada ogsijiinta agteeda ayaa aad u fiican!
HangZhou Sihope, Tani waa waxa aan adiga kugu jeclahay! Mar kasta oo aan arko inaad ku dadaasho inaad wax ka sii wanagsan sameyso - waxaa kugu jira rabitaan weyn oo horumar ah - ruux weyn oo aad wax ku hanan karto - waxaan jeclahay inaan si daacad ah u jeclahay dabeecadaas.
Waxaad ka mid tahay dad aad u yar oo aan awoodo inaan si xor ah u hadlo oo aan si fudud ugu shaqeeyo mahadsanid ! - Waxaan u maleynayaa in mararka qaarkood aan aad u xanaaqo oo aan xanaaqo - laakiin si fiican ayaad ii maamushaa oo wax walba u daryeesho - you are super!! runtii..
Tan iyo markii la aasaasay, warshadeena waxay horumarinaysay wax soo saarka heerka koowaad ee adduunka iyadoo la raacayo mabda'a tayada marka hore. Badeecadahayagu waxay heleen sumcad aad u wanaagsan xagga warshadaha iyo kalsoonida qiimaha leh ee macaamiisha cusub iyo kuwii hore.
soo gudbi hadda
wararka & blogyada
Isbarbardhigga sifooyinka waxqabadka, faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka saddexda kombaresarada hawada: kombaresarada hawada screw, centrifugal kombaresarada hawada, iyo kombaresarada piston ee is-beddelka ah.
1. Isku-xidhka kombaresarada Isroogga nooca hawada. Compressors-ka saliidda lagu duray ee hawada lagu shubo ayaa loo adeegsadaa aaladaha qaboojiyaha. Sababtoo ah qaab-dhismeedkooda fudud iyo qaybo yar oo xidhan, waxay yeelan karaan heerkulka qiiqa hooseeya ee xaaladaha shaqada oo leh kala duwanaansho cadaadis weyn ama saamiga cadaadiska, iyo prov ...
Marka la gaaro 2026, suuqa kala-soocidda hawada caalamiga ah wuxuu arki doonaa kobac la taaban karo
DBMR waxay ku dartay warbixin cusub oo lagu magacaabo "Suuqa Qalab Kala-duwanaanta Hawada", oo ka kooban jaantusyo xogeed sannadaha la saadaaliyay iyo taariikhda. Jadwalka xogtan waxaa matalaya "sheeko iyo garaafyo" oo ku faafay bogga oo si sahlan loo fahmo falanqaynta faahfaahsan. Kala soocida hawada eq...
Eray kombaresarka hawada iyo aqoonta la xiriirta
Cadaadiska: Cadaadiska loo tixraaco warshadaha kombaresarada waxaa loola jeedaa cadaadiska (P) Ⅰ, cadaadiska hawada caadiga ah (ATM) Ⅱ, cadaadiska shaqada, nuugid, cadaadiska qiiqa, waxaa loola jeedaa nuugida kombaresarada hawada, cadaadiska qiiqa ① Cadaadiska lagu cabiray cadaadiska atmospheric sida eber poi...